महिनवारी गडबडीलाई गम्भिर रुपमा लिने ? – Dainiki Sarokar
२०७७ फाल्गुन ७, शुक्रबार १४:२४
काठमाडौं।महिनावारी हरेक महिलाको जिवनमा किशोरावस्थामा शुरु भई महिनामा एकपटक योनीमार्गबाट रगत जाने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । महिनावारी कुनै पनि महिला आमा बन्नका योग्य भएको प्रमाण हो । महिनावारी भएपछि एक किशोरीलाई परिपक्व मान्ने गरिन्छ । एक महिलाको जिवनमा महिनावारी कम्तिमा १० वर्षको उमेरबाट सुरु भई ५०–५५ बर्ष भित्रमा सुक्छ अर्थात बन्द हुन्छ । सामान्यतय महिनावारी २८ दिनको अन्तरालमा हुन्छ । हाल धेरै महिलाहरु महिनावारी गडबढि भयो, महिनावारीको समयमा अत्याधिक पिडा भयो जस्ता गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यो समस्या हरेक घरमा छ भन्दा फरक नपर्ला । महिनावारी गडबडी किन हुन्छ ? भन्ने बिषयमा विराट अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ स्त्रि रोग विशेषज्ञ डा.अमित देबसँग महिला स्वास्थ्यकर्मी समृद्धा के.सी. ले गरेको कुराकानीको केहि सम्पादित अंशः
महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति त्यति सजक भएको पाइदैन । उनिहरुलाई समय सयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्छ । महिनावारी गडबढि प्रायः महिलामा हुने गर्छ । महिनावारी गडबडी एउटा आम समस्या हो ।
समयमा नै विज्ञसँग परामर्श लिएर उपचार गराएमा भविष्यमा आउनसक्ने अन्य समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।’
देशभर थप २ हजार ४२१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा २४४२ जनामा संक्रमण पुष्टि
नियमित केही मात्रामा खुर्सानी सेवनका फै फाइदा